အငွိမျ့မငျးသမီးလေး – My Blog
လူ့ ဘဝက မရိုးရှငျးပမေယျ့ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့အတှကွေုံ့တိုငျးမှာ ပေးဆပျမှု့ရှိကို ရှိနပေါတယျ။ပွညျစုံပွီ ထငျတဲ့ ဘဝရဲ့ အတိတျတှမှော ဝမျးနညျးမှု့တှကေ လကျပွ နူတျဆကျနကွေတုနျးပဲ။ဖွဈသငျ့တာထကျ ဖွဈခငျြတာတှေ လုပျမိတဲ့ခါ အားရကနြေပျခွငျးနဲ့အတူ မဖိတျချေါပဲ ရောကျလာတတျတဲ့ ဆနျ့ကငျြဖကျ အရာတှကေ နရေယူတတျကွတယျ။
ထာပါးဗြာ ကြုပျပုံပွငျလေး ပွောပွမယျ အပွငျးပွပေေါ့။အငျး ဘာပုံပွငျ လညျးတော့ မမေးနဲ့ ခငျဗြား လိုငျးဖှငျ့ပွီး ဖုနျးစခှငျပျေါကနေ အေးဆေးလေး ဖတျနဗြော။အရညျခငျြး ရှိပါလကျြ ရှေးခတျေ မိဘုရားခေါငျကွီး တယောကျကွောငျ့ ရှနေနျးတျောထဲ နနျးတှငျးမငျးသမီး နရောကနေ လကျစှဲအပြိုတျောလေး ဖွဈသှားရတဲ့ အငွိမျ့သမလေး အကွောငျးဗြ။အဲဒီခတျေက နနျးတှငျး သဘငျလောကမှာ နာမညျကြျောကွားတဲ့ ဆယျလီ တဈယောကျပေါ့။
တိုငျးပွညျအုပျခြုပျ မငျးလုပျတဲ့သူကလညျး ခသေူတော့မဟုတျဘူးဗြ တကယျ တကယျ။မငျးမြိုးမငျးနှယျ မဟုတျပဲ တိုကျရညျခိုကျရညျ ရှိလို့ တိုငျးပွညျကို သိမျးထားတာပါ။သူ့လကျအောကျက တိုငျးပွညျကို တိုးတကျအောငျ ကူညီပေးနတေဲ့ မငျးသား ဆိုတာ ရှိတယျ။ မငျးသားက အနအေေးပမေယျ့ အဆိပျပငျြးတယျ။သူက အငွိမျ့သမလေးရဲ့ ပရိတျသတျ တဈယောကျပါ။ကြုပျပွောတာ မြားသှားပွီ ကနျြတာဆကျဖတျဗြာ ထီးသုံးနနျးသုံး စကားလုံးတှေ မရေးတတျလို့ ရေးတတျသလို ရေးထားလိုကျတယျ။
ခတျေတခတျေရဲ့ နနျးတှငျးသဘငျသညျလောကတှငျ မယျဥလှိုငျ ဆိုသော အငွိမျ့မငျးသမီလေးမှာ နာမညျကွီးကာ မနားမနေ ကပွ အသုံးတျော ခံလကျြရှိသညျ။အနုပညာ ဝမျးစာ အတှကျ ရှေးခတျေ နနျးတှငျးသဘငျ ပညာသညျကွီးမြားဆီမှ သငျယူ တတျမွောကျထား၏။ပါရမီ ဓတျခံ ကောငျးသူမို့ နနျးတှငျးဇာတျအဖှဲ့မြားမှ ခေါငျးဆောငျမငျးသမီးကွီးမြား၏ နရောအား ခွိမျးခွောကျ လာတော့သညျ။ ထူကဲသောမကျြခုံး ဝိုငျးစကျသော မကျြဝနျးနကျကွီးမြားနှငျ့ ခြောမောလှပသော မကျြနှာပိုငျရှငျလေး၏ အသံလေးမှာ ကွားရသူတိုငျ ဘဝငျကစြခေဲ့၏။ပုခုံးကယျြကာ တငျးမောကျသော ရငျသားအစုံနှငျ့ ခါးသေးကဉျြလေးအောကျ စှံ့ကားကော့ထှကျနသေော ဖငျသားစိုငျကွီးမြားမှာ ခန်ဓာကိုယျ တပတျလှညျ့ကတိုငျး တုနျခါနပွေီး ပုရိသ အပေါငျးအား ညို့ယူဖမျးစားထားပွနျသညျ။
ထငျရှားကြျောကွားလှသော မငျးညီ မငျးသားမြား ကိုယျတိုငျ လကျထပျထိမျးမွှားဖို့ စိတျကူးနကွေ၏။ ထိုခတျေအခါက တိုငျးပွညျအုပျခြုပျသော မငျးတရားကွီး ကိုယျတိုငျ သဘငျသညျအား လကျထပျထိမျးမွှားယူရငျ ဘယျမငျးညီမငျးသားဖွဈဖွဈ သဘငျသညျအစုထဲ သှငျးခံရမညျဟု စညျးကမျးသတျမှတျထားသဖွငျ့ ဘယျမငျးသားမှ လကျထပျဖို့ မစဉျးစားရဲပေ။သို့သျော မယျဥလှိုငျ အား တပွညျ့မြား စလှေတျကာ လူမသိသူမသိ ကုတငျပျေါမှ ပွဇတျကရနျအတှကျ ကွိုးစားနသေော မငျးသား တဈပါး ရှိနခေဲ့၏။ မယျဥလှိုငျ၏ အကပညာ ပါရမီမှာ အငယျတနျး သဘငျသညျအခငျြးခငျြး ပုခုံးယှဉျဖို့ မဆိုထားနှငျ့ မျောလို့ပငျ မကွညျ့ဝံ့ခဲ့ကွပေ။သူမအား ကြောထောကျနောကျခံ ပွုပေးသော မငျးသား တပါးကလညျး ရှိနပွေနျသညျ။
ထိုခတျေက ဘုရငျ မငျးတရားကွီး၏ ရှနေားတျော ပေါကျအောငျ လြှာစောငျးထကျလှသဖွငျ့ ရာထူးခငျြး တူလငျြတောငျ လေးစားကွောကျရှံ့ရသော မငျးသားမှာ မယျဥလှိုငျ၏ ကာမစညျးစိမျအား ရယူရနျ ကွိုးပမျးနဆေဲပငျ။ ” ဥလေး ” ” ရှငျ … မောငျကွီး ” ” သဘငျသညျ အလုပျကို … နားပါ တော့လား ” ” အိုရျတျော … ကြုပျတို့ လကျမထပျခငျ … မောငျကွီး ပွောတဲ့စကား … ဖကျြတော့ မလို့လား ” ” မဟုတျပါဘူး … ဥလေးရယျ … မောငျကွီးပွောတာက … ကလေးယူပွီး သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝလေး ဖနျတီးဖို့ပါ … မောငျကွီး မိဘတှကေလညျး မွေးခြီဖို့ ပွောနကွေပွီလေ ” ယာပိုငျလယျပိုငျ သူကွှယျလေး မဲခေါငျ တဈယောကျ ပေးထားသော ကတိကွောငျ့ မယားဖွဈသူပျေါ တငျးတငျးကပျြကပျြလညျး မပွောဝံ့ပေ မိဘနှဈပါး၏ တောငျးဆိုးမှု့ကွောငျ့ မယားနှငျ့ မိဘမြားကွား စိတျကဉျြးကွပျနရေတော့သညျ။မယားဖွဈသူ စိတျဆိုးကာ ကှာရှငျးခှငျ့ တောငျးလာမှာကိုလညျး သမေတတျ ကွောကျရှံ့နရှော၏။ရုပျရညျရော ခန်ဓာကိုယျပါ ခြောမောတောငျ့တငျးသော ဇနီးခြောလေးအား ရှမွေို့တျောမှ မငျးညီမငျးသားမြားက အရယူဖို့ ကွိုးစားနကွေောငျး ကွားသိထားသညျ။
” မောငျကွီးရယျ … သဘငျပညာက … မယျဥလှိုငျရဲ့ အသကျပါ … ခုလညျး မောငျကွီး စိတျတိုငျးကြ ၁လမှ ၃ကွိမျပဲ လကျခံ ဖြျောဖွေ နတောလေ … ဒီထကျတော့ မလြော့ပါရစနေဲ့ … နားလညျပေး … ကလေးယူဖို့က နဲနဲ စောငျ့ပေးပါဦး … မယျဥလှိုငျ ၂နှဈလောကျ လှပျလှပျ လပျလပျ ကပွခငျြလို့ပါ ” ” ဟူးးးး … မောငျကွီး ဘာလုပျရပါ့မလဲ ” ” ကဲပါ … မောငျကွီးရယျ … စိတျညဈစရာတှေ ခဏထား … နောကျ ၃ရကျဆို မွို့ကွီးတမွို့ကို သှားဖြျောဖွရေမှာ … အတူရှိတုနျးလေး ခဈြကွရအောငျနျော ” မယျဥလှိုငျမှာ သဘငျပညာပျေါ အစှဲလမျးကွီးသလောကျ ခငျပှနျးသညျအပျေါလညျး သံယောစဉျကွီးကာ မယားဝတ်တရား တတျနိုငျသမြှ ကွပှေနျအောငျ ဖွညျ့စီးပေးတတျသညျ။
ပဉျြထောငျအိမျ နှဈထပျဆောငျ၏ အပျေါထပျ ညာဘကျခွမျးရှိ လငျမယား အိပျခနျးထဲ ခပျပွငျးပွငျး အသကျရှုသံ မြားနှငျ့ အတူ ညညျးသံမြား ထှကျပျေါလာတော့၏။ ” အဟငျ့ … မောငျကွီးရယျ … အမလေး … အ … အားးး ” မယျဥလှိုငျ၏ အိမျတှငျဝတျ ထမိနျလေး ကုတငျအောကျပုံကနြကော ပေါငျတနျ ဖှေးဖှေးကွီး နှဈဖကျက ကှေးမွှောကျထားရငျး တအားအား ညညျးတှားနသေညျ။သူမပေါငျကွားထဲ လငျတျောမောငျ မဲခေါငျ၏ ခါးလေး တလှုပျလှုပျဖွငျ့ စောကျပတျလေးအား တခကျြခငျြး လိုးပေးနေ၏။။ခါးအောကျ ဆီးခုံးခငျြး ထိကပျ လာစဉျ လီးအရငျးထိ ဝငျသဖွငျ့ ကုတငျကွမျးပွငျမှ အိပျယာခငျးအား လကျနှဈဖကျနှငျ့ ကဈြနအေောငျ ဆုပျထားမိသညျ။
အိမျထောငျ သကျတမျးတဈလြှောကျ သူမ စှဲလမျးနှဈခြိုကျမိသော အထိအတှေ့ တခုပငျဖွဈ၏။ ” အငျးဟငျး … မရပျနဲ့နျော … မောငျကွီး ” လီးအရသာ တှနေ့သေဖွငျ့ လငျဖွဈသူ မဲခေါငျအား ပါးစပျမှ ဗွောငျဖှငျ့ပွောလိုကျရသညျ။ထို့နောကျ လငျတျောမောငျ၏ ဆောငျ့ခကျြ မြားအား အရသာ ခံယူရငျး ကာမစညျးစိမျလေး ရရှိနတေော့၏။မဲခေါငျမှာလညျး မယားဖွဈသူ အလိုကြ ဆှဲကာ ဆောငျ့ကာဖွငျ့ အထှဋျထိပျရောကျရာ ခဏအကွာ နှဈဦးသား ငွိမျသကျသှား၏။
နောကျ ၁ပတျအကွာတှငျ လငျဖွဈသူ မဲခေါငျ တားနသေညျ့ကွားမှ နားလညျအောငျ ပွောပွကာ မရမက သူမ သဘငျပညာအား တငျဆကျရနျ မွို့တျောသို့ ရောကျရှိလာသညျ။မယျဥလှိုငျအား မွို့တျောတှငျ အစစ အရာရာ ကူညီ စောငျ့ရှောကျပေးသော မငျးသားမှာ ရှဆေုံ့းမှ အားပေးနေ၏။မယျဥလှိုငျ တဈယောကျ ခွဖွေားထောကျကာ ဖနောငျ့လေးကို အသာအယာကွှ၍ ခွသေလုံးသားလေးကို ညငျသာစှာ မွှောကျလိုကျရာ အတှငျးမှ အသားစိုငျဝငျးဝငျးလေးက ဒူးအထကျနားထိ မွငျနရေသဖွငျ့ မငျးသား မကျြလုံးမြား အရောငျတောကျနတေော့သညျ။ဆိုငျးဝိုငျးမှ ဗုံသံ လကှငျးသံမြား မွူးကွှလာစဉျ မယျဥလှိုငျ ကိုယျလုံးလေးမှာ စညျးဝါးအကိုကျ လပေျေါမွှောကျတကျကာ ပွနျအကတြှငျ ဒူးထောကျ ခါးကော့ကာ ကိုယျလုံးအား နောကျလှနျရငျး လကျကလေး နှဈဖကျမှာ လိပျပွာတောငျပံ ခတျသလို လထေဲ တဖကျြဖကျြ လှုပျခါနေ၏။
” ရှီး…. ဖြောငျး ဖြောငျးး ဖြောငျး… ” ရှီး… ရှီ ရှီ ရှီ ” စငျအောကျမှ အားပေးသော ပရိတျသတျ လကျခုပျသံမြား လကျခေါကျမှုတျသံမြား ဆူညံနတေော့သညျ။ဖြျောဖွပှေဲ အပွီး မငျးသားမှာ အခွရေံမြားဖွငျ့ အိမျတျောသို့ ပွနျလာရာ မညျသူမှ စကားမပွောပဲ တိတျဆိတျနခေဲ့၏။မယျဥလှိုငျ လပေျေါခုနျဝဲကပွစဉျ ထမိနျ အောကျနားစလေးမှာ ကှဲဟသှားရာ အတှငျးဘကျ ပေါငျသား ဖွူဖွူတုတျတုတျလေးအား အိမျတျောထိ မကျြဝနျးထဲ စှဲကပျပါလာတော့သညျ။အိပျခနျးသို့ မသှားသေးပဲ နားနဆေောငျ ကုတငျပျေါတှငျ လူးလိမျ့ရငျး မငျးသားတဈယောကျ ဝတျရုံတျောလဲကာ အိမျတျော အပွငျဘကျ ထှကျခဲ့လိုကျ၏။ မယျဥလှိုငျတို့ အဖှဲ့ ရောကျသညျနှငျ့ မငျးသားမှာ အိပျဆောငျ အခနျးမြား ခကျြခငျြး စီစဉျပေးသဖွငျ့ ပှဲပွီးသညျနှငျ့ ကိုယျအခနျးကို ပွနျပွီး အနားယူနကွေသညျ။မငျးသားက မယျဥလှိုငျအား သီးသနျ့ အိပျဆောငျ တဈဆောငျအား အစောငျ့အကွပျနှငျ့ ထားပေး၏။ခဏအကွာ မီးရောငျ မှိနျမှိနျလေး ထှနျးထားသော အိပျဆောငျ တဈဆောငျနား ရောကျလာရာ အစောငျ့မှ ခါးညှတျ နူတျဆကျသညျနှငျ့ မငျးသားမှာ လူရိပျ လူခွေ ကွညျ့ကာ ဝငျလိုကျတော့သညျ။
” လှလိုကျတာ … မယျဥလှိုငျရယျ ” မယျဥလှိုငျမှာ အဝတျစားလဲပွီးကာစ မတျတပျရပျလကျြ ပွတငျးပေါကျအား ငေးကွညျ့နစေဉျ ခပျတိုးတိုး ရရှေတျသံနှငျ့အတူ နောကျကြောဘကျဆီမှ သိုငျးဖကျခံလိုကျရသဖွငျ့ ထိတျကနဲ့ ရငျဖိုသှားမိသညျ။ဒီလိုခြိနျ သူမအား ဒီလို ဆကျဆံနိုငျသူမှာ အာဏာစကျပွငျးသော မငျးသားမှနျး လှညျ့မကွညျ့ပဲ သိရှိလိုကျ၏။နောကျကြောဘကျ ဖွနျ့ခထြားသော ဆံနှယျမြားအား ပှတျသပျဆုပျကိုငျနသေညျကို ခံစားသိရှိနပွေနျသညျ။လငျဖွဈသူ တားနသေညျ့ကွားမှ သဘငျပညာအပျေါ ခဈြမွတျနိုးလှ၍ ဇှတျလာခဲ့ရာ ပထမ ညမှာပငျ ဖြျောဖွပှေဲ အပွီး မငျးသား၏ အိပျဆောငျ တဈဆောငျတှငျ ကုတငျပျေါ ကပွ အသုံးတျော ခံလိုကျရ၏။လငျဖွဈသူ အပျေါ မထငျမှတျပဲ သစ်စာ ပကျြကာ အံကိုတငျးတငျးကွိတျရငျး ပွုသမြှ နုခဲ့ရသညျ။
အစှမျးကုနျ ထိနျးခြုပျထားရငျး ပွိုကလြာသော မကျြရညျမြားကွား ထူးကဲသော အထိတှကေ့ ဖွားယောငျးနပွေနျ၏။လငျတျောမောငျ မဲခေါငျနှငျ့ အပွုစု အယုယ ဘာမှ မဆိုငျသော မငျးသား လြှာစှမျးအောကျ အကွိမျကွိမျ လူးလိမျ့ရငျး အထှဋျအထိပျသို့ ရောကျရှိခဲရတော့သညျ။ပွောငျးလဲသှားသော စိတျဆန်ဒအား မတားဆီးလိုတော့ သာယာမိသော အထိတှနေ့ောကျ ဖုံးနိုငျသလောကျ ဖုံးဖိကာ နှဈမြောနေ၏။ သူမ အင်ျကြီလေးအား နောကျမှ သိုငျးဖကျရငျး ကွယျသီးမြား တလုံးခငျြး ဖွုတျပဈနသေညျ။အင်ျကြီကြှတျသညျနှငျ့ ဘျောလီအပွငျမှ နို့အုံလေးအား ညှဈခကြော ဂုတျသားဖှေးဖှေးလေးအား နမျးရငျး ထမိနျအပျေါအနားစအား ဖွညျခပြဈ၏။
” အဟငျ့ ဟငျ့ … မလုပျပါနဲ့တော့ … ကမြ က လငျရှိ မယားတဈယောကျပါနျော ” မယျဥလှိုငျ၏ တောငျးပနျသံလေးမှာ သူမ ဖငျသားစိုငျကွီးအား ညှဈခခြေံရစဉျ တိမျဝငျသှားတော့သညျ။စိတျထဲ စိုးရိမျထိတျလနျ့ စိတျလေးဖွငျ့ တရှိနျးရှိနျး ခံစားနရေခြိနျ သူမကိုယျလုံးလေးအား သနျမာသောလကျနှဈဖကျက ဆှဲလှညျ့ကာ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ နူတျခမျးဖူးဖူးလေးအား တစေု့ပျခံလိုကျရ၏။မကျြနှာခငျြးဆိုငျနမျးရငျး ဘျောလီခြိတျအား ဖွုတျကာ နို့အုံလေးအား ပွောငျးစို့ခံရပွနျသညျ။ကွီးမား ဖှံ့ထှားလှသော နို့အုံနှဈဖကျမှ နို့သီးခေါငျးလေးမြား ခကျြခငျြး မာထောငျလာ၏။ မယျဥလှိုငျ ခေါငျးလေး မော့တကျကာ တကြှတျကြှတျဖွငျ့ စုတျသပျနရော နို့သီးခေါငျးလေးအား ဖိစုပျခံရစဉျ ခါးအောကျ ကော့ထှကျနသေော ဖငျသားစိုငျနှဈခွမျးအား ဒုတိယအကွိမျ ဆုပျနယျခံရ၏။လငျဖွဈသူနှငျ့ အိမျထောငျ သကျတမျးတဈလြှောကျ လိုးခဲ့ပမေယျ့ သူမ ထမိနျအောကျနားစအား ဆီးခုံးပျေါတငျပေးပွီး လငျဖွဈသူ မဲခေါငျမှလညျး ပုဆိုးခြှတျကာ တနျးလိုးခဲ့သညျ။
အယုယ အပွုစု မြား မပါဝငျခဲ့ပေ။အောကျခထြားသော သူမလကျတဖကျမှာ မငျးသား ပေါငျကွားထဲမှ လီးကွီးနှငျ့ ထိကပျမိစဉျ ကုတငျပျေါသို့ ပှခြေီ့တငျခံလိုကျရပွနျ၏။ကုတငျပျေါ ကနျ့လနျ့ဖွတျ ကိုယျတဈပိုငျးကို ပကျလကျလနျစပွေီးမှ ပေါငျတနျနှဈဖကျအား ဆှဲဖွဲကာ စောကျပတျလေးအား အယကျခံလိုကျရသညျ။ ” အို … အို …… ဘာတှေ လုပျနတောလညျး …… အမလေးးးး အ အားးးး … အဟငျ့ ဟငျ့ ” စောကျပတျ တခါမှ အယကျမခံဘူး သဖွငျ့ ကိုယျလုံးလေး တှနျ့လိမျကာ ကုတငျအောကျ ကွမျးပွငျပျေါ ဒူးထောကျလကျြအနထေားဖွငျ့ ကုနျးယကျနသေော မငျးသား ခေါငျးအား လကျနှဈဖကျဖွငျ့ တှနျးထားလိုကျ၏။စောကျပတျအကျကှဲကွောငျးလေးထဲ လြှာထိပျလေးက ထိုးခှဲနရော ဘေးနူတျခမျးသားနှဈဖကျမှာ ဖေါငျးကွှလာသညျ။တဖွညျးဖွညျး စောကျစိလေး မာထငျကာ ခေါငျးထောငျလာစဉျ အဆံလေးအား ဆှဲစုပျခံရသဖွငျ့ ဖငျကွီးကွှတကျလာကာ မကျြစိစုံမိတျရငျး စောကျရညျမြား ထောငျပနျးနတေော့၏။စောကျရညျမြား အထှကျရပျမှ မကျြလုံးဖှငျ့ကွညျ့ရာ တှလေို့ကျရသော မွငျကှငျးကွောငျ့ လနျ့အျောမိသညျ။
” အမလေးးး ” မငျးသားမှာ မယျဥလှိုငျ စောကျပတျလေးအား ကွညျ့ရငျး ဝတျရုံအား ခါးစီးကွိုး ဖွညျခလြိုကျ၏။ ဝတျရုံကွားမှ အညိုရောငျ သနျးနသေော လီးကွီးမှာ အကွောပွိုငျးပွိုငျးထကာ တငျးပွောငျနသေညျကို မယျဥလှိုငျ မွငျလိုကျရ၏။လငျဖွဈသူ မဲခေါငျ၏ လီးတခြောငျးသာ မွငျဖူးရာ ယောင်ျကြားတိုငျး အတူတူ မှတျယူထားမိသညျ။ခု သူမ မွငျနရေသော လီးညိုကွီးမှာ နနျးတှငျး အစှမျးထကျသော ဆေးဖွငျ့ လိမျးပွီး လကေ့ငျြ့ထားသော လီးကွီးမို့ အရှညျ ၈လကျမခှဲကြျောကာ လုံးပတျမှာလညျး ၁၀နှဈသားအရှယျ ကလေး လကျမောငျးလုံးလောကျ ရှိနေ၏။
မယျဥလှိုငျ တဈယောကျ မကျြလုံးလေးပွူးကာ လီးကွီးအား ငေးကွညျ့နစေဉျ မငျးသားမှာ ပေါငျးနှဈခြောငျး ပခုံးပျေါထမျးကာ ကုတငျအောကျမှ မတျတပျရပျလကျြအနထေားဖွငျ့ စောကျခေါငျးပေါကျလေးထဲ လီးထိပျတကေ့ာ ပဈလိုးတော့သညျ။စောကျပတျထဲ လီးဝငျသညျနှငျ့ မယျဥလှိုငျ တဈယောကျ ငယျသံပါအောငျ အျောဟဈလိုကျရ၏။သူမ ထငျထားသညျမှာ ခပျဖွညျးဖွညျး တခကျြခငျြး လိုးမညျဟု ထငျနမေိရာ မနားတမျး ဆကျတိုကျ ဆောငျ့လိုးသဖွငျ့ စောကျခေါငျးပေါကျထဲ တဈစို့ကွီးဖွဈကာ အပွငျနူတျခမျးသားလေးမြား အနညျးငယျ ကှဲထှကျကုနျသညျ။ အထငျနဲ့အမွငျ လှဲကာ ကုတငျပျေါမှ မှရေ့ာခငျးအား လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ကဈြကဈြပါအောငျ ဆုပျကိုငျထားမိ၏။
” အ … အမေ့ … အဟငျ့ ဟငျ့ ” မယျဥလှိုငျ ဆတျကနဲ့ ပိတျလိုကျမိသညျ့ မကျြဝနျးနကျကွီးမှ စီးကလြာသော မကျြရညျမြားအား လကျဖမိုးနှငျ့သုတျရငျး ခေါငျးလေး ရမျးခါနရှောသညျ။မငျးသားမှာ သူ၏ လိုးခကျြမြားအောကျ အျောဟဈနသေော မယျဥလှိုငျအား ကွညျ့ကာ အားရကနြေပျ နေ၏။ထမျးထားသော ပေါငျနှဈလုံးအား လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ပူးကိုငျကာ ပေါငျတနျနှဈဖကျစိကာ ဖေါငျးကွှလာသော စောကျပတျလေးအား ပဈပဈ လိုးတော့သညျ။ဆောငျ့သညျ့ အရှိနျက အားပါသဖွငျ့ ကုတငျတိုငျမြား ရမျးခါနကော ဆောငျ့အားကွောငျ့ ကုတငျကွီး ရှရှေ့သှေ့ားနေ၏။
လီးကွီးဝငျလာတိုငျး သားအိမျခေါငျးအား ထိမိသဖွငျ့ စောကျပတျတအုံလုံး ကငျြတကျကာ နာလညျးနာ ကောငျးလညျးကောငျး အရသာ၂မြိုး ပူးတှဲခံစားရပွနျသညျ။တဖွညျးဖွညျး အံကွိတျခံရငျး နာကငျြမှု့ လြော့ကာ လီးအရသာ ခံစားမိလာတော့သညျ။ လငျဖွဈသူ မဲခေါငျ အပျေါ မထငျမှတျပဲ ဖေါကျပွနျမိကာ မငျးသား၏ လိုးခကျြမြားအောကျ စောကျရညျမြား ပနျးထုတျရငျး အထှဋျထိပျ ရောကျသှားတော့သညျ။ ပွီး
လူ့ ဘဝက မရိုးရှင်းပေမယ့် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွေ့ကြုံတိုင်းမှာ ပေးဆပ်မှု့ရှိကို ရှိနေပါတယ်။ပြည်စုံပြီ ထင်တဲ့ ဘဝရဲ့ အတိတ်တွေမှာ ဝမ်းနည်းမှု့တွေက လက်ပြ နူတ်ဆက်နေကြတုန်းပဲ။ဖြစ်သင့်တာထက် ဖြစ်ချင်တာတွေ လုပ်မိတဲ့ခါ အားရကျေနပ်ခြင်းနဲ့အတူ မဖိတ်ခေါ်ပဲ ရောက်လာတတ်တဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် အရာတွေက နေရယူတတ်ကြတယ်။
ထာပါးဗျာ ကျုပ်ပုံပြင်လေး ပြောပြမယ် အပြင်းပြေပေါ့။အင်း ဘာပုံပြင် လည်းတော့ မမေးနဲ့ ခင်ဗျား လိုင်းဖွင့်ပြီး ဖုန်းစခွင်ပေါ်ကနေ အေးဆေးလေး ဖတ်နေဗျာ။အရည်ချင်း ရှိပါလျက် ရှေးခေတ် မိဘုရားခေါင်ကြီး တယောက်ကြောင့် ရွှေနန်းတော်ထဲ နန်းတွင်းမင်းသမီး နေရာကနေ လက်စွဲအပျိုတော်လေး ဖြစ်သွားရတဲ့ အငြိမ့်သမလေး အကြောင်းဗျ။အဲဒီခေတ်က နန်းတွင်း သဘင်လောကမှာ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ဆယ်လီ တစ်ယောက်ပေါ့။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်တဲ့သူကလည်း ခေသူတော့မဟုတ်ဘူးဗျ တကယ် တကယ်။မင်းမျိုးမင်းနွယ် မဟုတ်ပဲ တိုက်ရည်ခိုက်ရည် ရှိလို့ တိုင်းပြည်ကို သိမ်းထားတာပါ။သူ့လက်အောက်က တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင် ကူညီပေးနေတဲ့ မင်းသား ဆိုတာ ရှိတယ်။ မင်းသားက အနေအေးပေမယ့် အဆိပ်ပျင်းတယ်။သူက အငြိမ့်သမလေးရဲ့ ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ပါ။ကျုပ်ပြောတာ များသွားပြီ ကျန်တာဆက်ဖတ်ဗျာ ထီးသုံးနန်းသုံး စကားလုံးတွေ မရေးတတ်လို့ ရေးတတ်သလို ရေးထားလိုက်တယ်။
ခေတ်တခေတ်ရဲ့ နန်းတွင်းသဘင်သည်လောကတွင် မယ်ဥလှိုင် ဆိုသော အငြိမ့်မင်းသမီလေးမှာ နာမည်ကြီးကာ မနားမနေ ကပြ အသုံးတော် ခံလျက်ရှိသည်။အနုပညာ ဝမ်းစာ အတွက် ရှေးခေတ် နန်းတွင်းသဘင် ပညာသည်ကြီးများဆီမှ သင်ယူ တတ်မြောက်ထား၏။ပါရမီ ဓတ်ခံ ကောင်းသူမို့ နန်းတွင်းဇာတ်အဖွဲ့များမှ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကြီးများ၏ နေရာအား ခြိမ်းခြောက် လာတော့သည်။ ထူကဲသောမျက်ခုံး ဝိုင်းစက်သော မျက်ဝန်းနက်ကြီးများနှင့် ချောမောလှပသော မျက်နှာပိုင်ရှင်လေး၏ အသံလေးမှာ ကြားရသူတိုင် ဘဝင်ကျစေခဲ့၏။ပုခုံးကျယ်ကာ တင်းမောက်သော ရင်သားအစုံနှင့် ခါးသေးကျဉ်လေးအောက် စွံ့ကားကော့ထွက်နေသော ဖင်သားစိုင်ကြီးများမှာ ခန္ဓာကိုယ် တပတ်လှည့်ကတိုင်း တုန်ခါနေပြီး ပုရိသ အပေါင်းအား ညို့ယူဖမ်းစားထားပြန်သည်။
ထင်ရှားကျော်ကြားလှသော မင်းညီ မင်းသားများ ကိုယ်တိုင် လက်ထပ်ထိမ်းမြှားဖို့ စိတ်ကူးနေကြ၏။ ထိုခေတ်အခါက တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သော မင်းတရားကြီး ကိုယ်တိုင် သဘင်သည်အား လက်ထပ်ထိမ်းမြှားယူရင် ဘယ်မင်းညီမင်းသားဖြစ်ဖြစ် သဘင်သည်အစုထဲ သွင်းခံရမည်ဟု စည်းကမ်းသတ်မှတ်ထားသဖြင့် ဘယ်မင်းသားမှ လက်ထပ်ဖို့ မစဉ်းစားရဲပေ။သို့သော် မယ်ဥလှိုင် အား တပြည့်များ စေလွတ်ကာ လူမသိသူမသိ ကုတင်ပေါ်မှ ပြဇတ်ကရန်အတွက် ကြိုးစားနေသော မင်းသား တစ်ပါး ရှိနေခဲ့၏။ မယ်ဥလှိုင်၏ အကပညာ ပါရမီမှာ အငယ်တန်း သဘင်သည်အချင်းချင်း ပုခုံးယှဉ်ဖို့ မဆိုထားနှင့် မော်လို့ပင် မကြည့်ဝံ့ခဲ့ကြပေ။သူမအား ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုပေးသော မင်းသား တပါးကလည်း ရှိနေပြန်သည်။
ထိုခေတ်က ဘုရင် မင်းတရားကြီး၏ ရွှေနားတော် ပေါက်အောင် လျှာစောင်းထက်လှသဖြင့် ရာထူးချင်း တူလျင်တောင် လေးစားကြောက်ရွံ့ရသော မင်းသားမှာ မယ်ဥလှိုင်၏ ကာမစည်းစိမ်အား ရယူရန် ကြိုးပမ်းနေဆဲပင်။ ” ဥလေး ” ” ရှင် … မောင်ကြီး ” ” သဘင်သည် အလုပ်ကို … နားပါ တော့လား ” ” အိုရ်တော် … ကျုပ်တို့ လက်မထပ်ခင် … မောင်ကြီး ပြောတဲ့စကား … ဖျက်တော့ မလို့လား ” ” မဟုတ်ပါဘူး … ဥလေးရယ် … မောင်ကြီးပြောတာက … ကလေးယူပြီး သာယာတဲ့ မိသားစု ဘဝလေး ဖန်တီးဖို့ပါ … မောင်ကြီး မိဘတွေကလည်း မြေးချီဖို့ ပြောနေကြပြီလေ ” ယာပိုင်လယ်ပိုင် သူကြွယ်လေး မဲခေါင် တစ်ယောက် ပေးထားသော ကတိကြောင့် မယားဖြစ်သူပေါ် တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လည်း မပြောဝံ့ပေ မိဘနှစ်ပါး၏ တောင်းဆိုးမှု့ကြောင့် မယားနှင့် မိဘများကြား စိတ်ကျဉ်းကြပ်နေရတော့သည်။မယားဖြစ်သူ စိတ်ဆိုးကာ ကွာရှင်းခွင့် တောင်းလာမှာကိုလည်း သေမတတ် ကြောက်ရွံ့နေရှာ၏။ရုပ်ရည်ရော ခန္ဓာကိုယ်ပါ ချောမောတောင့်တင်းသော ဇနီးချောလေးအား ရွှေမြို့တော်မှ မင်းညီမင်းသားများက အရယူဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း ကြားသိထားသည်။
” မောင်ကြီးရယ် … သဘင်ပညာက … မယ်ဥလှိုင်ရဲ့ အသက်ပါ … ခုလည်း မောင်ကြီး စိတ်တိုင်းကျ ၁လမှ ၃ကြိမ်ပဲ လက်ခံ ဖျော်ဖြေ နေတာလေ … ဒီထက်တော့ မလျော့ပါရစေနဲ့ … နားလည်ပေး … ကလေးယူဖို့က နဲနဲ စောင့်ပေးပါဦး … မယ်ဥလှိုင် ၂နှစ်လောက် လွပ်လွပ် လပ်လပ် ကပြချင်လို့ပါ ” ” ဟူးးးး … မောင်ကြီး ဘာလုပ်ရပါ့မလဲ ” ” ကဲပါ … မောင်ကြီးရယ် … စိတ်ညစ်စရာတွေ ခဏထား … နောက် ၃ရက်ဆို မြို့ကြီးတမြို့ကို သွားဖျော်ဖြေရမှာ … အတူရှိတုန်းလေး ချစ်ကြရအောင်နော် ” မယ်ဥလှိုင်မှာ သဘင်ပညာပေါ် အစွဲလမ်းကြီးသလောက် ခင်ပွန်းသည်အပေါ်လည်း သံယောစဉ်ကြီးကာ မယားဝတ္တရား တတ်နိုင်သမျှ ကြေပွန်အောင် ဖြည့်စီးပေးတတ်သည်။
ပျဉ်ထောင်အိမ် နှစ်ထပ်ဆောင်၏ အပေါ်ထပ် ညာဘက်ခြမ်းရှိ လင်မယား အိပ်ခန်းထဲ ခပ်ပြင်းပြင်း အသက်ရှုသံ များနှင့် အတူ ညည်းသံများ ထွက်ပေါ်လာတော့၏။ ” အဟင့် … မောင်ကြီးရယ် … အမလေး … အ … အားးး ” မယ်ဥလှိုင်၏ အိမ်တွင်ဝတ် ထမိန်လေး ကုတင်အောက်ပုံကျနေကာ ပေါင်တန် ဖွေးဖွေးကြီး နှစ်ဖက်က ကွေးမြှောက်ထားရင်း တအားအား ညည်းတွားနေသည်။သူမပေါင်ကြားထဲ လင်တော်မောင် မဲခေါင်၏ ခါးလေး တလှုပ်လှုပ်ဖြင့် စောက်ပတ်လေးအား တချက်ချင်း လိုးပေးနေ၏။။ခါးအောက် ဆီးခုံးချင်း ထိကပ် လာစဉ် လီးအရင်းထိ ဝင်သဖြင့် ကုတင်ကြမ်းပြင်မှ အိပ်ယာခင်းအား လက်နှစ်ဖက်နှင့် ကျစ်နေအောင် ဆုပ်ထားမိသည်။
အိမ်ထောင် သက်တမ်းတစ်လျှောက် သူမ စွဲလမ်းနှစ်ချိုက်မိသော အထိအတွေ့ တခုပင်ဖြစ်၏။ ” အင်းဟင်း … မရပ်နဲ့နော် … မောင်ကြီး ” လီးအရသာ တွေ့နေသဖြင့် လင်ဖြစ်သူ မဲခေါင်အား ပါးစပ်မှ ဗြောင်ဖွင့်ပြောလိုက်ရသည်။ထို့နောက် လင်တော်မောင်၏ ဆောင့်ချက် များအား အရသာ ခံယူရင်း ကာမစည်းစိမ်လေး ရရှိနေတော့၏။မဲခေါင်မှာလည်း မယားဖြစ်သူ အလိုကျ ဆွဲကာ ဆောင့်ကာဖြင့် အထွဋ်ထိပ်ရောက်ရာ ခဏအကြာ နှစ်ဦးသား ငြိမ်သက်သွား၏။
နောက် ၁ပတ်အကြာတွင် လင်ဖြစ်သူ မဲခေါင် တားနေသည့်ကြားမှ နားလည်အောင် ပြောပြကာ မရမက သူမ သဘင်ပညာအား တင်ဆက်ရန် မြို့တော်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။မယ်ဥလှိုင်အား မြို့တော်တွင် အစစ အရာရာ ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးသော မင်းသားမှာ ရှေ့ဆုံးမှ အားပေးနေ၏။မယ်ဥလှိုင် တစ်ယောက် ခြေဖြားထောက်ကာ ဖနောင့်လေးကို အသာအယာကြွ၍ ခြေသလုံးသားလေးကို ညင်သာစွာ မြှောက်လိုက်ရာ အတွင်းမှ အသားစိုင်ဝင်းဝင်းလေးက ဒူးအထက်နားထိ မြင်နေရသဖြင့် မင်းသား မျက်လုံးများ အရောင်တောက်နေတော့သည်။ဆိုင်းဝိုင်းမှ ဗုံသံ လကွင်းသံများ မြူးကြွလာစဉ် မယ်ဥလှိုင် ကိုယ်လုံးလေးမှာ စည်းဝါးအကိုက် လေပေါ်မြှောက်တက်ကာ ပြန်အကျတွင် ဒူးထောက် ခါးကော့ကာ ကိုယ်လုံးအား နောက်လှန်ရင်း လက်ကလေး နှစ်ဖက်မှာ လိပ်ပြာတောင်ပံ ခတ်သလို လေထဲ တဖျက်ဖျက် လှုပ်ခါနေ၏။
” ရွှီး…. ဖျောင်း ဖျောင်းး ဖျောင်း… ” ရွှီး… ရွှီ ရွှီ ရွှီ ” စင်အောက်မှ အားပေးသော ပရိတ်သတ် လက်ခုပ်သံများ လက်ခေါက်မှုတ်သံများ ဆူညံနေတော့သည်။ဖျော်ဖြေပွဲ အပြီး မင်းသားမှာ အခြေရံများဖြင့် အိမ်တော်သို့ ပြန်လာရာ မည်သူမှ စကားမပြောပဲ တိတ်ဆိတ်နေခဲ့၏။မယ်ဥလှိုင် လေပေါ်ခုန်ဝဲကပြစဉ် ထမိန် အောက်နားစလေးမှာ ကွဲဟသွားရာ အတွင်းဘက် ပေါင်သား ဖြူဖြူတုတ်တုတ်လေးအား အိမ်တော်ထိ မျက်ဝန်းထဲ စွဲကပ်ပါလာတော့သည်။အိပ်ခန်းသို့ မသွားသေးပဲ နားနေဆောင် ကုတင်ပေါ်တွင် လူးလိမ့်ရင်း မင်းသားတစ်ယောက် ဝတ်ရုံတော်လဲကာ အိမ်တော် အပြင်ဘက် ထွက်ခဲ့လိုက်၏။ မယ်ဥလှိုင်တို့ အဖွဲ့ ရောက်သည်နှင့် မင်းသားမှာ အိပ်ဆောင် အခန်းများ ချက်ချင်း စီစဉ်ပေးသဖြင့် ပွဲပြီးသည်နှင့် ကိုယ်အခန်းကို ပြန်ပြီး အနားယူနေကြသည်။မင်းသားက မယ်ဥလှိုင်အား သီးသန့် အိပ်ဆောင် တစ်ဆောင်အား အစောင့်အကြပ်နှင့် ထားပေး၏။ခဏအကြာ မီးရောင် မှိန်မှိန်လေး ထွန်းထားသော အိပ်ဆောင် တစ်ဆောင်နား ရောက်လာရာ အစောင့်မှ ခါးညွှတ် နူတ်ဆက်သည်နှင့် မင်းသားမှာ လူရိပ် လူခြေ ကြည့်ကာ ဝင်လိုက်တော့သည်။
” လှလိုက်တာ … မယ်ဥလှိုင်ရယ် ” မယ်ဥလှိုင်မှာ အဝတ်စားလဲပြီးကာစ မတ်တပ်ရပ်လျက် ပြတင်းပေါက်အား ငေးကြည့်နေစဉ် ခပ်တိုးတိုး ရေရွတ်သံနှင့်အတူ နောက်ကျောဘက်ဆီမှ သိုင်းဖက်ခံလိုက်ရသဖြင့် ထိတ်ကနဲ့ ရင်ဖိုသွားမိသည်။ဒီလိုချိန် သူမအား ဒီလို ဆက်ဆံနိုင်သူမှာ အာဏာစက်ပြင်းသော မင်းသားမှန်း လှည့်မကြည့်ပဲ သိရှိလိုက်၏။နောက်ကျောဘက် ဖြန့်ချထားသော ဆံနွယ်များအား ပွတ်သပ်ဆုပ်ကိုင်နေသည်ကို ခံစားသိရှိနေပြန်သည်။လင်ဖြစ်သူ တားနေသည့်ကြားမှ သဘင်ပညာအပေါ် ချစ်မြတ်နိုးလှ၍ ဇွတ်လာခဲ့ရာ ပထမ ညမှာပင် ဖျော်ဖြေပွဲ အပြီး မင်းသား၏ အိပ်ဆောင် တစ်ဆောင်တွင် ကုတင်ပေါ် ကပြ အသုံးတော် ခံလိုက်ရ၏။လင်ဖြစ်သူ အပေါ် မထင်မှတ်ပဲ သစ္စာ ပျက်ကာ အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ရင်း ပြုသမျှ နုခဲ့ရသည်။
အစွမ်းကုန် ထိန်းချုပ်ထားရင်း ပြိုကျလာသော မျက်ရည်များကြား ထူးကဲသော အထိတွေ့က ဖြားယောင်းနေပြန်၏။လင်တော်မောင် မဲခေါင်နှင့် အပြုစု အယုယ ဘာမှ မဆိုင်သော မင်းသား လျှာစွမ်းအောက် အကြိမ်ကြိမ် လူးလိမ့်ရင်း အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲရတော့သည်။ပြောင်းလဲသွားသော စိတ်ဆန္ဒအား မတားဆီးလိုတော့ သာယာမိသော အထိတွေ့နောက် ဖုံးနိုင်သလောက် ဖုံးဖိကာ နှစ်မျောနေ၏။ သူမ အင်္ကျီလေးအား နောက်မှ သိုင်းဖက်ရင်း ကြယ်သီးများ တလုံးချင်း ဖြုတ်ပစ်နေသည်။အင်္ကျီကျွတ်သည်နှင့် ဘော်လီအပြင်မှ နို့အုံလေးအား ညှစ်ချေကာ ဂုတ်သားဖွေးဖွေးလေးအား နမ်းရင်း ထမိန်အပေါ်အနားစအား ဖြည်ချပစ်၏။
” အဟင့် ဟင့် … မလုပ်ပါနဲ့တော့ … ကျမ က လင်ရှိ မယားတစ်ယောက်ပါနော် ” မယ်ဥလှိုင်၏ တောင်းပန်သံလေးမှာ သူမ ဖင်သားစိုင်ကြီးအား ညှစ်ချေခံရစဉ် တိမ်ဝင်သွားတော့သည်။စိတ်ထဲ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် စိတ်လေးဖြင့် တရှိန်းရှိန်း ခံစားနေရချိန် သူမကိုယ်လုံးလေးအား သန်မာသောလက်နှစ်ဖက်က ဆွဲလှည့်ကာ မျက်နှာချင်းဆိုင် နူတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးအား တေ့စုပ်ခံလိုက်ရ၏။မျက်နှာချင်းဆိုင်နမ်းရင်း ဘော်လီချိတ်အား ဖြုတ်ကာ နို့အုံလေးအား ပြောင်းစို့ခံရပြန်သည်။ကြီးမား ဖွံ့ထွားလှသော နို့အုံနှစ်ဖက်မှ နို့သီးခေါင်းလေးများ ချက်ချင်း မာထောင်လာ၏။ မယ်ဥလှိုင် ခေါင်းလေး မော့တက်ကာ တကျွတ်ကျွတ်ဖြင့် စုတ်သပ်နေရာ နို့သီးခေါင်းလေးအား ဖိစုပ်ခံရစဉ် ခါးအောက် ကော့ထွက်နေသော ဖင်သားစိုင်နှစ်ခြမ်းအား ဒုတိယအကြိမ် ဆုပ်နယ်ခံရ၏။လင်ဖြစ်သူနှင့် အိမ်ထောင် သက်တမ်းတစ်လျှောက် လိုးခဲ့ပေမယ့် သူမ ထမိန်အောက်နားစအား ဆီးခုံးပေါ်တင်ပေးပြီး လင်ဖြစ်သူ မဲခေါင်မှလည်း ပုဆိုးချွတ်ကာ တန်းလိုးခဲ့သည်။
အယုယ အပြုစု များ မပါဝင်ခဲ့ပေ။အောက်ချထားသော သူမလက်တဖက်မှာ မင်းသား ပေါင်ကြားထဲမှ လီးကြီးနှင့် ထိကပ်မိစဉ် ကုတင်ပေါ်သို့ ပွေ့ချီတင်ခံလိုက်ရပြန်၏။ကုတင်ပေါ် ကန့်လန့်ဖြတ် ကိုယ်တစ်ပိုင်းကို ပက်လက်လန်စေပြီးမှ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်အား ဆွဲဖြဲကာ စောက်ပတ်လေးအား အယက်ခံလိုက်ရသည်။ ” အို … အို …… ဘာတွေ လုပ်နေတာလည်း …… အမလေးးးး အ အားးးး … အဟင့် ဟင့် ” စောက်ပတ် တခါမှ အယက်မခံဘူး သဖြင့် ကိုယ်လုံးလေး တွန့်လိမ်ကာ ကုတင်အောက် ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်လျက်အနေထားဖြင့် ကုန်းယက်နေသော မင်းသား ခေါင်းအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တွန်းထားလိုက်၏။စောက်ပတ်အက်ကွဲကြောင်းလေးထဲ လျှာထိပ်လေးက ထိုးခွဲနေရာ ဘေးနူတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်မှာ ဖေါင်းကြွလာသည်။တဖြည်းဖြည်း စောက်စိလေး မာထင်ကာ ခေါင်းထောင်လာစဉ် အဆံလေးအား ဆွဲစုပ်ခံရသဖြင့် ဖင်ကြီးကြွတက်လာကာ မျက်စိစုံမိတ်ရင်း စောက်ရည်များ ထောင်ပန်းနေတော့၏။စောက်ရည်များ အထွက်ရပ်မှ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရာ တွေ့လိုက်ရသော မြင်ကွင်းကြောင့် လန့်အော်မိသည်။
” အမလေးးး ” မင်းသားမှာ မယ်ဥလှိုင် စောက်ပတ်လေးအား ကြည့်ရင်း ဝတ်ရုံအား ခါးစီးကြိုး ဖြည်ချလိုက်၏။ ဝတ်ရုံကြားမှ အညိုရောင် သန်းနေသော လီးကြီးမှာ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထကာ တင်းပြောင်နေသည်ကို မယ်ဥလှိုင် မြင်လိုက်ရ၏။လင်ဖြစ်သူ မဲခေါင်၏ လီးတချောင်းသာ မြင်ဖူးရာ ယောင်္ကျားတိုင်း အတူတူ မှတ်ယူထားမိသည်။ခု သူမ မြင်နေရသော လီးညိုကြီးမှာ နန်းတွင်း အစွမ်းထက်သော ဆေးဖြင့် လိမ်းပြီး လေ့ကျင့်ထားသော လီးကြီးမို့ အရှည် ၈လက်မခွဲကျော်ကာ လုံးပတ်မှာလည်း ၁၀နှစ်သားအရွယ် ကလေး လက်မောင်းလုံးလောက် ရှိနေ၏။
မယ်ဥလှိုင် တစ်ယောက် မျက်လုံးလေးပြူးကာ လီးကြီးအား ငေးကြည့်နေစဉ် မင်းသားမှာ ပေါင်းနှစ်ချောင်း ပခုံးပေါ်ထမ်းကာ ကုတင်အောက်မှ မတ်တပ်ရပ်လျက်အနေထားဖြင့် စောက်ခေါင်းပေါက်လေးထဲ လီးထိပ်တေ့ကာ ပစ်လိုးတော့သည်။စောက်ပတ်ထဲ လီးဝင်သည်နှင့် မယ်ဥလှိုင် တစ်ယောက် ငယ်သံပါအောင် အော်ဟစ်လိုက်ရ၏။သူမ ထင်ထားသည်မှာ ခပ်ဖြည်းဖြည်း တချက်ချင်း လိုးမည်ဟု ထင်နေမိရာ မနားတမ်း ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးသဖြင့် စောက်ခေါင်းပေါက်ထဲ တစ်စို့ကြီးဖြစ်ကာ အပြင်နူတ်ခမ်းသားလေးများ အနည်းငယ် ကွဲထွက်ကုန်သည်။ အထင်နဲ့အမြင် လွဲကာ ကုတင်ပေါ်မှ မွှေ့ရာခင်းအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားမိ၏။
” အ … အမေ့ … အဟင့် ဟင့် ” မယ်ဥလှိုင် ဆတ်ကနဲ့ ပိတ်လိုက်မိသည့် မျက်ဝန်းနက်ကြီးမှ စီးကျလာသော မျက်ရည်များအား လက်ဖမိုးနှင့်သုတ်ရင်း ခေါင်းလေး ရမ်းခါနေရှာသည်။မင်းသားမှာ သူ၏ လိုးချက်များအောက် အော်ဟစ်နေသော မယ်ဥလှိုင်အား ကြည့်ကာ အားရကျေနပ် နေ၏။ထမ်းထားသော ပေါင်နှစ်လုံးအား လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပူးကိုင်ကာ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်စိကာ ဖေါင်းကြွလာသော စောက်ပတ်လေးအား ပစ်ပစ် လိုးတော့သည်။ဆောင့်သည့် အရှိန်က အားပါသဖြင့် ကုတင်တိုင်များ ရမ်းခါနေကာ ဆောင့်အားကြောင့် ကုတင်ကြီး ရွေ့ရွေ့သွားနေ၏။
လီးကြီးဝင်လာတိုင်း သားအိမ်ခေါင်းအား ထိမိသဖြင့် စောက်ပတ်တအုံလုံး ကျင်တက်ကာ နာလည်းနာ ကောင်းလည်းကောင်း အရသာ၂မျိုး ပူးတွဲခံစားရပြန်သည်။တဖြည်းဖြည်း အံကြိတ်ခံရင်း နာကျင်မှု့ လျော့ကာ လီးအရသာ ခံစားမိလာတော့သည်။ လင်ဖြစ်သူ မဲခေါင် အပေါ် မထင်မှတ်ပဲ ဖေါက်ပြန်မိကာ မင်းသား၏ လိုးချက်များအောက် စောက်ရည်များ ပန်းထုတ်ရင်း အထွဋ်ထိပ် ရောက်သွားတော့သည်။ ပြီး
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အငွိမျ့မငျးသမီးလေး